DEG DEG:- Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo shaaciyay inuu musharax madaxweyne yahay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo shaaciyay inuu musharax madaxweyne yahay
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa goordhaw si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu yahay musharax u taagan qabashada xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ee doorashada dalka ka dhici doonta dhamaadka sanadkaan ee 2016-ka.
Shir jaraa’id uu ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid goordhaw ku qabtay xafiiskiisa magaalada Muqdisho ayuu ku shaaciyay inuu ka mid yahay musharixiinta u tartameysa xilka madaxtinimo ee Soomaaliya, isagoona rajo wanaagsan ka muujiyay inuu xilka ku guuleysan doonno.
Ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid oo maalmihii ugu dambeeysay safar ku joogay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya, ayaa halkaasi kula kulmay mas’uuliyiin ka tirsan beesha caalamka, kuwaas oo taageero kaga raadsanaayo ololihiisa musharaxnimo.
Qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida ayaa maalmihii ugu dambeysay hadal-heysay in ra’iisul wasaare Cumar C/rashiid u tartami doonno xilka madaxtinimo ee doorashada dalka ka dhici doonta dhamaadka sanadkaan 2016-ka, isagoona loolan xoogan la geli doonno dhowr musharaxiin oo uu ka mid yahay Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Dhinaca kale, maalintii shalay ayaa isna waxaa ku dhawaaqay inuu musharax madaxweyne yahay Maxamed Cali Ameeriko, kaas oo hore u ahaan jiray safiirka Soomaaliya ee u fadhiya dalka Kenya.